လ - တယ်လီ relay ကို 4G ထားရန် Nokia သည်စာချုပ်တစ်ခုရရှိခဲ့သည်
4G ကိုလသို့ယူဆောင်လာရန် Nokia သဘောတူလိုက်သည်
ဆက်သွယ်မှုသည်ယနေ့မရှိမဖြစ်လိုအပ်သည်။ သင်ကမ္ဘာဂြိုဟ်ပေါ်ရှိမည်သည့်နေရာတွင်မဆို၊ သင်အင်တာနက်ချိတ်ဆက်နိုင်လိမ့်မည်ဟုမျှော်လင့်ပါသည်။ မည်သို့ပင်အသုံးပြုသောနည်းပညာ၏။ ပြီးတော့အာကာသထဲမှာလည်းအရေးကြီးတယ်။ လပေါ်မှာ။
နောက်တစ်ခါသင်လသို့သွားပြီးဓာတ်ပုံရိုက်ရန်နှင့်ဆိုရှယ်မီဒီယာတွင်တင်ရန်ဆုံးဖြတ်သည့်အခါကျေးဇူးတင်စရာကောင်းလိမ့်မည် Nokia က။ အမှန်စင်စစ်ဖင်လန်ကုမ္ပဏီကြီးသည်နာဆာမှဒေါ်လာ ၁၄.၁ သန်းရန်ပုံငွေကိုအနိုင်ရရုံမျှမက၊ လပေါ် 4G ဆက်သွယ်မှု.
4G ကိုလသို့ယူဆောင်လာရန် Nokia
ဟုတ်ပါတယ်၊ ဒီ 4G ရဲ့နိဒါန်းကအာကာသယာဉ်မှူးတွေကိုလကနေ selfies တွေတင်ခွင့်ပြုမှာမဟုတ်ဘူး။ ဒါပေမယ့်ဒီဂြိုဟ်တုပေါ်မှာဒီဆက်သွယ်မှုရှိနေတာဟာများစွာသောအရာတွေကိုခွင့်ပြုပေးလိမ့်မယ်။ ချိတ်ဆက်နိုင်ပါ အင်တာနက်ကို တိုက်ရိုက်မွန်းကနေအလွန်ဆက်သွယ်ရေးကူညီသင့်ပါတယ်။ လက်ရှိရရှိနိုင်သည့်နည်းပညာများနှင့်နှိုင်းယှဉ်လျှင်ပိုမိုကောင်းမွန်သောအမြန်နှုန်း၊ ယုံကြည်စိတ်ချရမှုနှင့်အကွာအဝေးများတိုးတက်ခြင်း
Apollo ပထမမစ်ရှင်များလက်ထက်၌အင်ဂျင်နီယာများသည် base station များ၊ relay များနှင့်အခြား networked transmitter များမှဖြတ်သန်းသွားသောရေဒီယိုဆက်သွယ်ရေးများကိုသာအားကိုးနိုင်သည်။ 4G ကိုအသုံးပြုလျှင်၎င်းသည်စနစ်တစ်ခုလုံးကိုပိုမိုထိရောက်စေသည်။
အဘယ်ကြောင့် 5G ကိုအသုံးပြုမထားသလဲ သို့သော်ဤဆက်သွယ်မှုသည် ပို၍ မြန်သည်။ မေးခွန်းအတော်လေးတရားဝင်သည်။ အချို့သော 5G နည်းပညာများသည် 4G ကဲ့သို့သောအကွာအဝေးများကိုမဖုံးအုပ်နိုင်ပါ။ တစ်နည်းဆိုရသော်အနည်းဆုံးယခုအချိန်တွင်မှန်ကန်သောရွေးချယ်မှုမဟုတ်ပါ။ ကိစ္စရပ်အားလုံးတွင်၊အာကာသ ပြီးသားနည်းပညာတစ်ခုအံ့ is ဖြစ်ပါတယ်။ 4G ဒါမှမဟုတ် 5G ကနေတဆင့်ပဲအရေးမကြီးပါဘူး၊ တကယ်ကိုအထင်ကြီးစရာပါ။ ဒီဟာကနာဆာကလိုချင်တဲ့အနာဂတ်လအခြေစိုက်စခန်းတည်ဆောက်မှုနဲ့လည်ပတ်မှုကိုသိသိသာသာရိုးရှင်းစေသင့်တယ်ဆိုတာသံသယဖြစ်စရာမရှိပါ။ ဆက်ရန် !
အမေရိကန်အမျိုးသားလုံခြုံရေးဆိုင်ရာပစ္စည်းများကိုပထမဆုံးအကြိမ်သယ်ဆောင်ရန် SpaceX ၏ပြန်လည်အသုံးပြုနိုင်သည့်ဒုံးကျည်များ
SpaceX သည် Starship ၏ပထမဆုံးအမြင့်ပိုင်းပျံသန်းမှုအစီအစဉ်ကိုနှေးကွေးစေသည်
Rocket Lab နှင့်၎င်း၏အီလက်ထရွန်ဒုံးပျံများအတွက်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းသို့ပြန်လာခြင်း
ဤဆောင်းပါးသည် https://www.begeek.fr/nokia/remporte-un-contrat-pour-aller-mettre-la-4g-sur-la-lune-349082 တွင်ပထမဆုံးပေါ်ထွက်လာခဲ့သည်။
Tele RELAY တစ်ခု 30193 ရေးသားချက်များ 1 မှတ်ချက်များ
'လိင်ကိစ္စသတ်ဖြတ်မှု' - ဘာလင်မှတေးဂီတဖွင့်ပွဲပြင်ပရှိဆန္ဒပြသူများကိုဆန္ဒပြခြင်း - ဗီဒီယို
FICO ၂၀၂၀ လှုပ်ရှားမှုများစတင်ခြင်း - Seri Jean Charles ပထမဆုံးဆုရှင် - Abidjanshow.com